सार्वजनिक यातायात खुल्ने कुरा कहाँ पुग्यो ? – Khabar Silo
उच्च अदालत जनकपुरधामका न्यायाधीशमा कोरोना पुष्टि
उच्च अदालत जनकपुरधामका एक न्यायाधीशमा बिहीबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै प्रदेश २ मा दुई जना न्यायाधीशमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । पचास वर्षीय न्यायाधीशमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको अदालत स्रोतले जनाएको छ। यही साउन १३ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशसहित २२ जनाको स्वाब संकलन गरी जाँच गरेकामा एक जनाको पोजेटिभ देखिएको हो। न्यायाधीशमा […]
कोरोना कहर- मास्कले छोप्यो दसैँको खुशी !
काठमाडौं । हिन्दू नेपालीहरुको सबैभन्दा ठूलो पर्व हो दसैँ । अनि दसैँको पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण र उल्लासमय दिन हो विजया दशमी अर्थात् टीका ।यो दिन मान्यजनसँग टीका र जमरा लगाएर आशिर्वाद लिने दिन हो । दसैँमा टीका लगाउनकै लागि मानिसहरु विदेशबाट स्वदेश फर्किने र स्वदेशकै शहरबाट गाउँमा मान्यजनसमक्ष पुग्छन् ।दसैँ आपसमा भेटघाट र खुशी साटासाट […]